सन २०२० को भ्रमण बर्षलाई केन्द्रित बनाएका छौ | Sindhu Jwala
नारायण श्रेष्ठ (अध्यक्ष)
सिन्धु पर्यटन व्यवसायी संघ, सिन्धुपाल्चोक
नेपाल सरकारले सन २०२० लाई भिजिट नेपालको रुपमा मनाउने गरी तयारी थालेको छ । सरकारको चारखम्बे नीति कृषि, पर्यटन, जलविद्युत र व्यापार मध्ये पर्यटन महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । राजधानीबाट नजिक रहेको सिन्धुपाल्चोक पर्यटन व्यवसायको महत्वपूर्ण क्षेत्र मानिन्छ । यसकारण समग्र सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको पर्यटन क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ? सन २०२० को भ्रमण वर्षलाई जिल्लाका पर्यटन व्यवसायीहरुले कस्तो तयारी गरिरहेका छन् भन्ने सन्दर्भमा सिन्धु पर्यटन व्यवसायी संग सिन्धुपाल्चोकका अध्यक्ष नारायण श्रेष्ठसंग सिन्धुज्वालाका सम्पादक दिनेश दुलालले लिएको छोटो कुराकानीको सम्पादित अंश –सम्पादक
१) यहाँ सिन्धु पर्यटन व्यवसायी संघ सिन्धुपाल्चोकको अध्यक्ष हुनुहुन्छ यहाँ अध्यक्ष भएसंगै जिल्लाको पर्यटन व्यवसायमा कतिको सुधार आएको छ ?
सर्वप्रथम हामीले यो संगठनलाई संगठित बनाएको धेरै भएको छैन । यति छोटो समयमा हामीले सिन्धुपाल्चोकको पर्यटकीय क्षेत्रहरुको विषयमा अध्यान गरेर सम्भाव्यता के छ भन्ने कुरा निश्कर्षमा पुगेर पर्यटन व्यवसायीलाई प्रर्वद्वन गर्न एउटा कार्यविधि बनाएर अगाडी बढाईरहेको अवस्था छ । सुकुटे क्षेत्रमा भएको विश्वको प्रसिद्व ¥याफ्टिङलाई एकदमै प्राथमिकता दिएको छ । त्याहाँ भएका सम्भावानाहरुलाई हामीले बजारमा ल्याएर त्यसलाई विश्वव्यापी रुपमा लैजाने प्रयत्न गरेका छौं । त्यसमा भएका चुनौतिहरुका विषयहरुमा पनि हामीले खुलस्त प्रत्येक व्यक्ति तथा संघ संस्थाहरुलाई बारम्बर सचेत गरायौं । त्यसलाई हामीले अन्र्तरक्रियाबाट हुन्छकी सञ्चार माध्यामबाट हुन्छ सबैतिरबाट पहल गर्दा पनि नभएपछि सर्वोच्चको ढोका ढकढक्याएको अवस्था हो । वास्तवमा यो संस्थाले छोटै समयमा निकै गतिविधिहरु औंल्याएको छ । यसकारण यो संस्थाले भविश्यमा आफ्ना गतिविधिहरु तिब्रतामा बढाईरहेको हुँदा भविश्यमा राम्रै गर्छ भन्ने मेरो ठम्याई हो ।
२) सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको पर्यटन व्यवसायको वर्तमान अवस्था कस्तो छ ?
हाम्रो जिल्ला राजधानीबाट अतिनै नजिकको दुरीमा छ । साथै यातायात तथा स्थलमार्गको सबै सुविधा भएको हुनाले सिन्धुपाल्चोक पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा भविश्यमा पहिलो हुने जिल्ला हो । किनभने हामीले काठमाडौंबाट ५० किमीको दुरी पार गर्ने वितिक्कै हामी सजिलै सिन्धुपाल्चोक पुगेर त्याहाँका क्रियाकलापहरु हेर्न र अनुभव गर्न पाईन्छ । जस्तै ¥याफ्टिङको कुरा गर्नुहुन्छ भने ६५ किमी भित्र त्यो पुरा गर्न सकिन्छ । त्यस्तै चिया बगानको कुरा गर्दा भोटेचौरलाई मिनी ईलाम पनि भन्छन् । त्यो डाँडा सम्म पुग्नको लागि काठमाडौं देखि जम्मा ३५ किमी मात्रै टाढा पर्छ । त्यस्तै मेलम्ची त्याहाँबाट नजिकै छ । एशियाकै चर्चित बन्जी काडमाडौंबाट जम्मा १०० किमी टाढा रहेको छ । भनाईको तात्पर्य के हो भने अहिले हामीले हेर्दा खेरी सिन्धुपाल्चोक चाँही पर्यटकीय उचित गन्तब्य हो भन्ने हाम्रो ठम्याई हो । यदि हामीेले त्याहाँ उपलब्ध भएका प्राकृतिक स्रोत साधनलाई प्रयोग गर्ने हो भने पर्यटकको चाप जुन अहिले छ त्यो भन्दा दशौं गुना बढ्द्रै जाने हामीले अनुमान लगाएका छौ । हामीकाहाँ केही सिमित मात्रै रहेको एडबिनचरको रुपमा साहसिक पर्यटकको रुपमा सिन्धुपाल्चोकलाई १ नम्बरमा राख्न सकिन्छ । जस्तै बन्जी त्यहि छ, ¥याफ्टिङ त्यहि छ । त्यसैगरी हामी प्याराग्लाडिङ असोजबाट सुरु गर्दै छौं । त्यस्तै जुगल हिमालको त्यतिनै रुपमा अगाडी बढेको छ । अब हामीले छिटो भन्दा छिटो जुगलको बेशमा हुनपर्ने पूर्वाधार लगाएतको तयारी छ त्यसलाई पुरा गर्नुपर्ने छ । त्यो विषयमा हामीले छलफल चलाएका छौं । अब हामीले माउन्टेन बाईकको प्रतिश्पर्धा, हाईकिङ देखि साहासिक पर्यटकको लागि उपयुक्त गन्तव्य सिन्धुपाल्चोक हुने छ । जसमध्ये ¥याफ्टिङ बन्जी, हाईकिङ र क्यानोनिङ चाँही उच्च प्राथमिकतामा राखेर सञ्चालन गरिरहेका छौं । आन्तरिक पर्यटकको वृद्वि बढेसंगै मुख्य गन्तव्यको रुपमा भोटेकोशी करीडोर भएको छ । त्यसकारण यो क्षेत्रको भविश्य उज्ज्ल रहेको छ । यसकारण सिन्धुपाल्चोक जिल्ला पूर्णरुपले नेपालको एक महत्वपूर्ण गन्तब्य हो भन्ने कुरा हामीलाई विश्वास भएको छ ।
३ यहाँले सिन्धुपाल्चोक पहिलो नम्बरको गन्तब्य हो भनेर भनिरहँदा यहाँको संघ गठन भएयता सिन्धुपाल्चोकको पर्यटन पर्वद्वनको लागि खासै काम गरेको देखिएन नी ?
मैले अघि नै भनिसकेकी यति छोटो समयमा यति धेरै क्रियाकलाप गरेर आएका छौं । सबै पक्षहरु एकै प्रकारका हुँदैनन् । टिकाटिप्पणी हुनु स्वभाविक हो । ति टिका टिप्पणीहरु चाँही कति अर्थपूर्ण छ भनेर हामीले महसुस गर्ने हो । सिन्धु पर्यटन व्यवसायी संघले समग्र सिन्धुपाल्चोकका पर्यटक क्षेत्रहरुको पहिचान गराउन सफल भएको छ । उदाहरणको रुपमा सुकुटेको अवस्था कति त्रासदीपूर्ण थियो । ति कुराहरु हामीले निर्मुल गरिसकेका छौं । जथाभावी नदि उत्खननले त्यो क्षेत्रको पर्यटन व्यवसाय नै धरापमा पर्ने भो भनेर स्थानीय जनता तथा विभिन्न सरोकारपक्षसंग छलफल अन्तरक्रिया गरेर केही सहज वातावरण बनाएका छौं । यहाँहरुले अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ की गत साल भन्दा अहिले निकै सुधार भएको छ । यि समस्याहरु हिजोका दिनमा थिए । जनप्रतिनिधि, नागरिक अगुवाहरु, राजनीतिक दल लगाएत कसैले पनि समाल्न नसक्दा हामीले नेतृत्व लिन परेको हो । सोही अनुसार हामीले पर्यटन प्रर्वद्वनको कामलाई तिब्रता दिएका छौं । एउटा उदाहरण दिउ अब पोखारामा अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन साथ त्याहाँको प्याराग्लाईडिङ अन्त्य नै हुन्छ । त्यसको लागि राजधानीबाट सबैभन्दा नजिक भनेको सिन्धुपाल्चोक नै हो । नयाँ गन्तव्यको रुपमा हामी धेरै जिल्लामा सर्च ग¥यौं तर त्यसको लागि उपयुक्त ठाउँ चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको ९ नम्बर वडा नै उपयुक्त लाग्यो । हामीले त्यस ठाउँमा सफल परिक्षण गराएर सिन्धु पर्यटन व्यवसायी संघको प्रत्यक्ष लगानीमा अब असोज देखि व्यवसायीक रुपमा सुरु गर्दै छौं । यसको मूल्याङकन सिन्धुपाल्चोकबासीले पक्कै गरिरहेका होलान । यसकारण पर्यटन प्रव्र्रद्वनको सन्दर्भमा सिन्धुपर्यटन व्यवसायी संघको कार्यक्रम सुस्त भएको भन्न मिल्दैन ।
४ पर्यटन संग सम्बन्धित जिल्लामा यसअघि सिन्धु पर्यटन परिषद् पनि छ फेरी अर्को संस्था नै किन आवश्यक प¥यो त ?
कुनै पनि संघ संस्थाहरु एकल रुपमा सञ्चालन गर्दा त्यसले पूर्णता नपाउन सक्छ । यो व्यवसायीसंग आवद्व साथीहरु संगको छलफलले सिन्धुपाल्चोक जिल्लालाई पर्यटन पर्वद्र्वन गर्न सिन्धु पर्यटन परिषद्ले मात्र भूमिका पुगेन भन्ने निष्कर्षमा पुगेर हामीले यो संस्था दर्ता गरेका हौं । संस्था थपिएर केही बिग्रिएको छैन् । उहाँहरु संग भावानात्मक हिसाबले पनि सहकार्य गरेर नै अगाडि बढीरहेका छौं । अन्ततः पछि गएर एउटै संस्था बनाउने हाम्रो उदेश्य रहेको छ । सिन्धु पर्यटन परिषद् आफैंमा गौरान्भित संस्था हो । सुरुमा सिन्धुपाल्चोकको पर्यटन क्षेत्रको रुपमा चिनाउने महत्वपूर्ण भूमिका उहाँहरुबाटै सुरुवात भएको हो । तर आजका दिनमा त्यो मात्रै प्रयाप्त भएन एउटाले बाटो देखाउने अर्कोले कार्यान्वयन गर्ने तरिकाले हामी व्यवसायीहरु संगठित भएर पहिचान संगसंगै पर्यटन विकास गर्नको लागि हामी सबैको उतिनै आवश्यक छ भनेर लागेका हौं । हाम्रो आगमन पछि सुकुटे क्षेत्रमा दर्जनौं रिसोर्टहरु हाम्रै प्रयत्नको कारणले स्थापित हुनुभएको छ । जसका कारण मेलम्ची लगाएत क्षेत्रहरुमा जाहाँ–जाँहा पर्यटकीय सम्भावना बोकेको छ ति ठाउँहरमा हाम्रा साथीहरु पुगेका छन् । पर्यटन प्रवद्र्वनको मूख्य स्रोत भनेको लगानी नै हो । यसको लागि हामीले जापनको एनआरएन समेत ल्याएर लगानी गर्ने वातावरण बनाएका छौं । त्यस्तै अहिले उच्च बन्जीजम्प मात्रै छ अहिले हामीले मिनी बन्जीजम्पको अवधारणा समेत लाईसकेका छौं । यसकारण हामी दुईवटै पर्यटन संग सम्बन्धित संस्थाको आवश्यक छ । यदि हामी दुईवटै संस्था मिल्यौं भने एकअर्काको परिपुरक हुनसक्छौं ।
५ नेपाल सरकारले सन २०२० लाई भिजिट नेपालको रुपमा मनाउने भनेर तयारी गरिरहँदा यहाँहरको संस्थाले चाँहि कस्तो तयारी गर्नुभएको छ नी ?
एकदमै नजिकि सकेको छ । अब चार महिना बित्न साथै सन २०२० सुरु हुन्छ । सरकारको जुन लक्ष्य छ त्यो लक्ष्यलाई पुर्ति गर्नको लागि सिन्धु पर्यटन व्यवसायी संघले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाहा गरेको छ । सरकारले गर्ने क्रियाकलाप हामी व्यवसायीले गरेका छौं । २०२० को जुन लक्ष्यका लागि काम भईरहेको छ त्यसको लागि केही संकट भएको हामीले महसुस गरेको छौं । २० लाख पर्यटक भित्र्याउनेको लागि जुन रुपले सेवा सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने हो त्यसको लागि त्यतिनै जनशक्तिको आवश्यकता रहेको छ । त्यो जनशक्ति आवश्यकताको लागि हामीले पुर्ताल गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर हामीकाहाँ जनशक्ति विदेशिएको अवस्था छ । यसको लागि हामीले नेपाल सरकारलाई गम्भिर भएर ध्यानकर्षण गराउन पर्छ । हामी स्थनाीय स्तरमा रहेका सबै व्यवसायीहरुले त्यो जनशक्ति उत्पादनको लागि प्रयन्त गर्ने छौं । त्यसको लागि हामीले तालिमको व्यवस्था गरेर उत्पादन गरिरहेका छौं । यदि पूर्व तयारी नगर्ने हो भने सरकारले सोचेको जस्तो लक्ष्य पुरा हुन सक्दैन हामीले त्यो रुपमा मनाउन सक्दैनौं । किनभने पर्यटकहरुलाई हामीले सेवासुविधा दिन सकेनौं भने भोली त्यसको नकरात्मक असर दृघकालिन रुपमा पर्नेछ । यसको साथसाथै पूर्वाधारको पनि कमि रहेको छ । यसको लागि सरकारसंग यो पूर्वाधारको तयारीको लागि हामी ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छौं ।
६ सिन्धुपाल्चोकमा मुख्य –मुख्य पर्यटकीय क्षेत्रहरु के कति छन् ?
खासै किटान गर्नु पर्दा पहिलो नम्बरमा ¥याफ्टिङ नै पर्दछ । त्यस्तै बन्जी, केनेनिङ र भोटेकोशी करीडोरमा जाने रिसोर्टहरु लगाएत पर्दछन् । त्यसैगरी भोटेचौरको चिया बगान, पाँचपोखरी, भैरवकुण्ड तथा हेलम्बु क्षेत्र रहेको छ । पछिल्लो पटक सिन्धुपाल्चोकको मुख्य पर्यटकीय क्षेत्र पाँचपोखरी पछि जुगल हिमाल रहन गएको छ । ताकी काठमाडौंबाट सबैभन्दा नजिकको जुगल हिमालको पिकमा पुग्न एकै दिन पुग्न सकिने भएको छ । अहिले त्यसको पूर्वाधार विकासको लागि केन्द्रीय सरकार देखि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले त्यसको काम थालेको छ । केही महिना पछि प्याराग्लाडिङ सुरुवात हुँदै छ । त्यसकारण अब जिल्लाका महत्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तब्य पहिचान भईसकेको छ जसलाई कार्यन्वयन गर्न आवश्यक छ ।
७ यहाँले भने जस्तै नेपाल सरकारले सिन्धुपाल्चोकका केही क्षेत्रहरुलाई पर्यटकीय नयाँ गन्तब्यको रुपमा सूचिकृत समेत गरिसकेको छ तर ति ठाउँहरुमा पूर्वाधारको भने विकास भएको देखिदैनन नी ?
वास्तवमै सरकारले पाँचपोखरी लगाएत जिल्लाका महत्वपूर्ण क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तब्यको रुपमा सूचिकृत गर्ने कुरालाई गर्व गर्नु पर्दछ । तर घोषणा मात्र गरिदिएर पुग्दैन त्यस ठाउँमा पर्यटक जानको लागि सबभन्दा पहिला पूर्वाधार चाहियो । जस्तै भोटेकोशी करिडोर क्षेत्रमा पूर्वाधारको पूर्णरुपमा विकास भईसेको छ । यस क्षेत्रलाई अब खासै समस्या देखिैन । तर त्यसको संरक्षण र कहाँदेखि कहाँसम्म भन्ने कुरा पनि किटान गर्न आवश्यक थियो यो चाँही राज्यको कमजोरी हो है भन्ने हाम्रो बुझाई हो । त्यस्तै पाँचपोखरी लगाएत स्थानमा जानको लागि सडक, बास बस्नको लागि होटलहरु लगाएत सहज वातावरण आवश्यक रहेको छ । अब कुरा रह्यो हाम्रा व्यवसायी साथीहरुले पनि पूर्वाधार विकासको लागि पहल गर्नुपर्छ । छोटो समय भएको हुनाले अहिले जे जस्तो अवस्था छ । पर्यटकलाई सेवा सुविधा पु¥याउनको लागि क्याम्प नै खडा गरेर भएपनि बनाउन पर्छ भनेर हामीले व्यवसायी साथीहरुलाई भनिरहेका छौं । भावी दिनमा त्यस भेगमा कति वटा रिसोर्टहरु बनाउन पर्छ भन्ने उद्देश्य राखेर छलफल बाराम्बर चलाई रहेका छौं ।
९) समग्र सिन्धुपाल्चोकको पर्यटनको विकास गर्नको लागि हाल के कस्ता समस्या र चुनौतिहरु छन् ?
अवश्य पनि जुनसुकै क्षेत्रमा सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ चुनौति पनि उत्तिनै हुन्छ । तर सिन्धुपाल्चोकको हकमा चुनौतिहरु चाँहि अलि बेसी होकी भन्ने कुरा हो । भोगेर आईसके पश्चात संगठित हुन परेको हो त्यसकारण चुनौति संगसंगै सम्भावना पनि उच्च रुपमै छ । किनकी मैले अघि पनि कोट गरिसके की साहासिक पर्यटक देखि लिएर सम्पूर्ण खालको पर्यटक त्याहाँ जान रुचाउँछन् । अब जाने शिलशिलामा विश्वको सातौं स्थानमा पर्ने भोटेकोशी ¥याफ्टिङको लागि देश विदेशबाट आउने पर्यटकहरुलाई हामीमा भएको ¥यापिड अर्थात छाङ्गाहरुमा ग्रेडिङ अनुसार पर्यटकहरुलाई मनोरञ्जन गराई रहेका हुन्छौं । माथिल्लो क्षेत्रमा जलविद्युतको कारणले समाप्तै हुने होकी भन्ने हामी चिन्ता छ । त्यस्तै तल्लो क्षेत्रमा नदिजन्य उत्खनन्को कारणले भोलिको दिनमा खोला पनि नरहने हो की, त्यो बगरको रुपमा परिणत हुने हो की भन्ने चिन्ता छ । भएका ति छाङ्गाहरु (¥यापिटहरु) नरहने होकी भन्ने चिन्ता लागिरहेको छ । त्यो चिन्ता लाग्ने शिलशिलमा अब हामीले त्यसलाई कसरी बचाउने र बचाउनको लागि के के गर्नुपर्छ भनेर छलफल पनि गरायौं । यो मुख्य चुनौति होईन किनभने होटल तथा रिसोर्ट सञ्चालनमा अलि बढी गुण्डागर्दी भएको छ । किनकी व्यवसायीहरुले सुरक्षित रुपमा छौं भनेर व्यवसाय गर्न पाएको छैन् । यो चुनौतिहरुलाई राज्यले यथाशिर्घ निर्मल गर्नुपर्छ । जस्तै जथाभावी नदि दोहोन तत्काल रोक्नुपर्छ । प्रशासनिक क्षेत्रमा अलिकति बढि चलाएमान गरेर यो गुण्डागर्दीको अन्त्य गर्नुपर्छ, व्यवसायीहरुलाई लगानी गरेर सुरक्षित हुनको लागि चाँहि प्रतिवद्वता वा ग्यारेन्टी राज्यले गर्ने हो भने चुनौति हटेर जान्छ । सम्भावनाको कुरा गर्दा २०२० को लागि केही नभएपनि २० लाखको २० प्रतिशत सम्म लान सक्छौं की भन्ने हामीले उद्देश्य राखेका छौं । यो लान सक्यौं भने यो सिन्धुपाल्चोकलाई मात्र होईन की राज्यको २०२० को योजना पनि सफल हुने र राज्यलाई पनि पर्यटकहरुको मनोरञ्जन प्रदान गरेर पर्यटन क्षेत्रको प्रर्वद्वन गरेर संकलन गरिने जुन आर्थिक क्रियाकलाप हुन्छ यो नै उपलब्धीमुलक हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
१०, पर्यटनको क्षेत्रहरु मध्ये ¥याफ्टिङ पनि एउटा महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । भोटेकोशी नदिको ¥याफ्ङि विश्वमै चर्चामा छ तर यो क्षेत्रमा नदिजन्य पदार्थ उत्खननले गर्दा पर्यटन क्षेत्रलाई प्रभावित बनाएको भनिन्छ । यो समस्या समाधान गर्नको लागि सिन्धु पर्यटन व्यवसायी संघले के कस्तो भूमिका निर्वाहा गर्न सक्छ ?
त्यो हामीले प्रयत्न गरेका छौ । जस्तो की स्थानीय नागरिक, अगुवा लगाएत व्यक्तित्वहरुलाई राखेर हामीले बाराम्बर कम्तिमा पनि ६ महिनामा तीनपटक अन्र्तरक्रिया नै ग¥यौं । अन्र्तरक्रियाले मात्र पूर्ण नदेखिएपछि हामीले पत्रकार सम्मेलन पनि ग¥यौं । यो हाम्रो मात्रै होईन राज्यको पनि समस्या हो तर दायित्व हाम्रो पनि हो भनेर निरन्तर छलफल पनि चलायौं । यो मात्रैले नपुगेर कुनै निकायले चासो नदिएको कारणले हामीले अन्तिम विकल्पको रुपमा सर्वोच्चमा रिट समेत हालेका छौं । यो क्षेत्रलाई विनाश गर्न दिनुहुँदैन विकास गराउन पर्छ । यो नदिको कारणले यहाँ एक वर्षमा लगभग ८० हजार पर्यटक घुम्नको लागि आएका छन् भने अब भावी दिनमा यसको संरक्षण गर्दै जाने हो भने अझ संख्या बढ्दै जान्छ नी । यदि यो वातावरणलाई संरक्षण नगर्ने हो भने ८० हजार होईन ८ हजार पनि नजाने हुनसक्छ । त्यसकारण हामीले यो नदि दोहन देखि प्राकृतिक क्षेत्रको विनासलाई रोक्न धेरै मिहिनेत पनि गरेका छौं ।
११) सिन्धु पर्यटन व्यवसायी संघको आगमी योजना के कस्ता रहेका छन् ?
आगमी योजना भन्नाले नजिकै आउँदै गरेको २०२० को भ्रमण वर्षलाई सफल बनाउन लाग्ने योजना नै हो । सिन्धुपाल्चोकका पहिचान भएका जुन जुन पर्यटकीय क्षेत्र छन् तिनको पूर्वाधारको विकास गर्ने, जति सक्दो बढि सिन्धुपाल्चोकमा पर्यटक कसरी भित्र्याउन सकिन्छ भनेर रणनीति बनाएका छौं । सिन्धुपाल्चोकमा जति पनि पर्यटकीय गन्तब्य छन् ति ठाउँहरुमा पर्यटक पु¥याउन पूर्वाधार र जनशक्ति महत्वपूर्ण कुरा हो । यसको लागी सरकारलाई घचघच्याउनको साथै राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय रुपमा समेत पहल गरेका छौं । जस्तै जापनिज एनआरएन समेत आएर यहाँ लगानी गरिसकेको छ । त्यसैगरी भोलिका दिनमा चिनियासंग समेत सम्बन्ध विस्तार गर्ने योजनामा छौं । मुख्य कुरा कुन ठाउँमा सम्भावना छ भनेर त्यसको खोजिनीति गर्दै त्यसको सम्भाव्यताको आधारमा लगानी कर्ताहरु भित्र्याउने योजनामा छौं ।
१२ अन्त्यमा यस मिडिया मार्फत सिन्धुबासीलाई यहाँको भनाई केही छ की ?
साँच्चै पछिल्लो पटक सिन्धुपाल्चोकका पर्यटन व्यवसायीहरुमा यो पेशा अंगाल्दा जिविकोपार्जन मात्र नभई आम्दानीको प्रचुर सम्भावना हुँदो रहेछ भन्ने कुरा महसुस भएको छ । पछिल्लो पटक लगानी बढेका कुराहरुले देखाउँछ । यसकारण यस जिल्लामा सम्भावना भएको किटान भएका जुन–जुन क्षेत्र छन् । व्यवसायी साथीहरुले स्वत स्फुर्त ढंगले आफ्नै ठाउँमा आफ्नै लगानीमा केही गर्न सक्ने सम्भावना प्रचुर छ त्यो गर्नुहोस त्यसको लागि साथ सहयोग यस संघको रहने छ । व्यवसाय सुरक्षाको लागि स्थानीय प्रशासन र नेपाल सरकार संग अनुरोध पनि गर्छौं । यदि सिन्धुपाल्चोक जिल्लालाई पर्यटन प्रर्वद्वन गराउँदै आर्थिक विकासको पाटोलाई गुणत्तर रुपमा लैजाने हो भने सम्भावना राम्रो छ । सिन्धुपाल्चोकका व्यवसायीहरुले सिन्धु पर्यटन व्यवसायी संघ संग समन्वय गरेको खण्डका हामीले साथ र सहयोग गर्ने छौं भन्ने प्रतिवद्वता व्यक्त गर्न चाहान्छु । धन्यवाद ।